Kwichina L'Oreal Royal Golden Supplement Cream PR Gift Package abavelisi kunye nabathengisi | I-BXL
I-L'Oreal yasebukhosini yokuxhasa ikhrimu yesipho sePR PR
Kwinqanaba lokuqala lokwazisa le mveliso, abantu abadumileyo baya kunceda ekukhuthazeni, ke into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele xa uyila iphakheji yindlela yokutsala kunye nokuhlaba umxhwele abasebenzisi ngokubonakalayo nangobuchule, kunye nokuqaqambisa indawo yokuthengisa.
Ngokweemfuno zomthengi kwaye ngokusekwe kwixabiso lebrendi, i-BXL Creative iseke iqela lenkonzo yeprojekthi ye-L'Oreal yaza yaya eShanghai amatyeli aliqela ukubamba iisemina nabathengi. Benze ubunzulu bokwenza le mveliso, kugxilwe kwiimbono ezintathu zoyilo: ubuchule, ukungqinelana, kunye nomlinganiso.
Umsebenzi ophucukileyo wokuyila kufuneka wenze abantu bafune ukubamba kunye nokuthenga. Ngokusekwe kwixabiso labantu abakumgangatho ophezulu, umyili uphucule amagama aphambili kuyilo: inqanaba eliphezulu lokuqonda, ukuqonda okusemgangathweni, umdla, uyingqayizivele, ulungile, ubonakalisa ukusebenza.
Eyona mveliso iphambili yale bhokisi yesipho se-PR, ibhotile encinci yobusi, isebenzisa incindi exabisekileyo yeManuka ukuqaqambisa indawo yokuthengisa yemveliso ngokubonakalayo.
Umsebenzi woyilo ogqwesileyo kufuneka ucace gca, kwaye ukupakishwa kwangaphakathi kunye nokupakishwa kwangaphandle kufanele kube kumgangatho ofanelekileyo.
Ubume beebhokisi zangaphandle buxeliswa kwimingxunya yeenyosi, ukukhawulela kunye nokuqaqambisa ukusebenza okuphezulu kwemveliso, ukutyebisa iziphumo ezibonakalayo ngeenkcukacha, kunye nokubonisa ulungelelwaniso lobuhle bemveliso.
Uhlobo lwebhotwe, umbala oqaqambileyo wegolide, ukupakishwa kwegobolondo ye-arc, umphezulu webhokisi yesipho iqulethe ulindelo. Ngaphakathi yamkela iimveliso ezinexabiso eliphezulu kunye noyilo olucokisekileyo: ipateni eyilwe neebusi zobusi ezidityaniswe neentyatyambo zeManuka kunye nobusi, zidityaniswa nokukhanya kwesona siphumo sihle somboniso.
Egqithileyo Iindawo zeefektri zeebhokisi ezibonisiweyo eziprintiweyo- I-Chess Makeup-iBXL yokuPakisha okuYilayo
Okulandelayo: I-L'Oréal's Age egqibeleleyo ye-deluxe yesikhumba PR yoyilo lwePakethe yokuPakisha
Uyilo lweKhithi yokuThintela ukuThengisa kunye noMenzi
IPrim Prit Uyilo kunye noMenzi